लिलिबिलीलाई दर्शकको साथ – Mero Samachar
Homeमनोरन्जनलिलिबिलीलाई दर्शकको साथ
लिलिबिलीलाई दर्शकको साथ
काठमाडौं : नयाँ वर्षको छेकोमा रिलिज गरिएको चलचित्र लिलिबिलीलाई दर्शकले रुचाएका छन् । प्रदर्शनमा आएको दोस्रो दिन देशभरका सिनेमा हलमा हाउसफुल व्यापार गरेको चलचित्रले तीन दिनमा तीन करोडमाथि कलेक्सन गरेको वितरक गोविन्द शाहीले बताए ।
प्रदीप खड्का र जसिता गुरुङको केमेस्ट्री दर्शकले मन पराए । युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय मानिएका प्रदीपको लोकप्रियतालाई यो चलचित्रले थप उचाइ दिएको छ । चलचित्र प्रदर्शनमा आएका हलमा प्रदीप आफैं उपस्थित भएर सेल्फी लिइरहेका भेटिए । लिलिबिलीको प्रचारका लागि हास्य टेलिसिरियलसमेत पनि खेले । दर्शकलाई लिलिबिली हेर्न उनले गरेको आग्रह खेर गइरहेको छैन।
गोविन्द शाही, मिलन चाम्स र सुदीप खड्काले संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको चलचित्र मिलनले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा प्रदीप र जसिताका साथै प्रियंका कार्की,सविन श्रेष्ठ, अनुपविक्रम शाहीलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
एन्फा महासचिवमा इन्द्रमान तुलाधर
रंगमञ्‍चका लागि कस्तो रह्‍यो २०७४ ?
अञ्जु पन्तको आधुनिक गीत ‘नरुनु है’ बजारमा
भारतीय किशोरको रेकर्ड- ४ ओभर ० रन १० विकेट
पूर्वेली मतदाता झुक्याउने नाराः जहाँ उम्मेदवार, त्यहीँ राजधानी
चुनाबी चटक ! नवराज सिलवालले धान काटे, आरजूले ढकिया बोकिन्
गर्भवती निशाले पेट देखाउँदै भनिन्-‘सानो बाँदर’